सडक दुर्घटना हुनबाट यसरी बच्ने, बजारमा अायाे ‘ग्राहम’ ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सडक दुर्घटना हुनबाट यसरी बच्ने, बजारमा अायाे ‘ग्राहम’ !
एजेन्सी । मान्छेहरुसंग पनि विभीन्न किसिमका अनौठा कला हुने गर्दछन् । र, तीनै कलाहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्दछन् । यस्तै अष्ट्रेलीयन कलाकारले दैनिकजसो हुने सडक दुर्घटनाबाट बच्न सिकाउने एउटा ग्राहम बनाएका छन् ।
यो मुर्तीकलाले सडक दुर्घटना हुनबाट बच्ने पाठ सिकाउने छ । तीब्र गतिमा चल्ने गाडि र यसले निम्त्याउने दुर्घटनाले पुरयाउने क्षतीको बारेमा पाठ सिकाउनेछ । यसले रोड सिस्टमबारे बुझाउनमा सहयोग गर्नेछ भने, आफ्नै गल्तीले गर्दा हुने दुर्घटनाबाट बच्ने पाठसमेत सिकाउने छ ।
अनौठो खालको यो ग्राहम लण्डनमा रहेको छ । भट्ट हेर्दा मानिस जस्तै लाग्ने यो ग्राहम मानविय अस्थिपञ्चर जस्तै एक मुतीकर्ला मात्र हो । अभ्रख, सिसाको रेशा, मानिसको छाला र रौँबाट निर्माण गरेको यो ग्राहम ‘भिक्टोरीया ट्रान्सपोर्ट आयोग’का सहयोगमा बनाईएको हो । सो ग्राहम मेलवर्नका मुर्तीकारले बनाएका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाको प्रभाव : उपत्यकाबाट दैनिक २ लाख बाहिरिँदै, रुट परमिट खुला
१७,पुष.२०७४,सोमबार १७:३० मा प्रकाशित
← नासुदेखि सहसचिवसम्म शक्तिकेन्द्र धाउँदै, कर्मचारीकाे राेजाइ किन बनेन स्थानीय तह !
सीता एयरका प्रबन्धक बलात्कारको अभियोगमा प्रक्राउ →